मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्दै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा परिएला है ! « GDP Nepal
मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्दै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा परिएला है !
Published On : 15 January, 2019 10:33 am
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले अवैध रुपमा मोटरसाइकललाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउनेविरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको छ । पछिल्ला २ दिनमा दर्जन बढी यस्ता मोटरसाइकल कारबाहीमा परिसकेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई भाडामा प्रयोग गरिने प्लेटफर्म ‘पठाओ’ र ‘टुटल’सँग आवद्ध चालकहरूको संख्या २० हजारभन्दा बढी रहेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । यसमध्ये बल्ल १ दर्जन कारबाहीमा परेका छन् ।
ट्राफिकले कारबाही सुरु गरेसँगै यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ । कतिपयले युवाहरुले नवीन सोचका साथ अघि बढाएको कामलाई अवरोध गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् । तर, यसरी मोटरसाइकलमा व्यावसायिक प्रयोजनमा भाडामा लगाउनु गैरकानुनी भनेर कानुनमै स्पष्ट लेखिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ताको प्रमाण पत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने छ । त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । निजी सवारी भन्नाले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनु पर्नेछ भनि ऐनको अनुसूची २ को खण्ड ‘ग’मा लेखिएको छ ।
एक वर्षदेखि धन्धा, सरकार बल्ल तात्यो
हालसम्म प्रहरीले करिब एक दर्जन मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । जबकि टुटलले दुई वर्षअघि र पठाओले करिब १ वर्ष देखि यस्तो कार्य गरिरहेका छन् । तर, यातायात व्यवस्था विभाग भने अझै बेखबरजस्तै छ ।
त्यसो त ट्राफिक प्रहरी यो व्यवसायको विरुद्ध छैन । उसले सम्बन्धित कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालनको अनुमति लिएरमात्र यस्तो कार्य गर्न भनेको छ ।
हालसम्म पठाओको नेपालमा १० हजार राइडर एप्लिकेसन डाउनलोड भएको छ भने सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसन पनि २ लाख हाराहारीमा डाउनलोड भइसकेको छ ।
यस्तै, टुटलको ९ हजारभन्दा बढी राइडर एप्लिकेसन डाउनलोड भएका छन् । मोटरसाइकलमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्नेले १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक कमाइ गर्ने गरेका छन् ।
पठाओ र टुटलले आम्दानीको ४ प्रतिशत कमिसन रकम लिने गरेका छन् ।